Calling Cards: call Zimbabwe and get 333 minutes per $10 phone card
PHONE CARDS: CALL ZIMBABWE
Please note the rates for cellular phones: Zimbabwe-Mobile, Zimbabwe-Mobile Econet, Zimbabwe-Mobile Netone, Zimbabwe-Mobile Telcel.
All Time Calling Card: call Zimbabwe for 9.5¢.
Top Plus Calling Card Rate for calling Zimbabwe: 3.0¢.
Guaranteed Time Phone Card: call Zimbabwe for 9.0¢.
Good Call Long Distance Phone Card Rate calling Zimbabwe: 4.0¢.
CiCi Long Distance Call to Zimbabwe rate: 13.3¢.
Call Mobile Prepaid Phone Card: call Zimbabwe for 4.6¢.
Clean Card Prepaid Calling Card Rate to Zimbabwe: 11.6¢.
Calling Card Calling Card: call Zimbabwe for 8.3¢.
No Fees Calling Card Rate for calling Zimbabwe: 12.1¢.
Good Time Phone Card: call Zimbabwe for 6.4¢.
Premier Plus Long Distance Phone Card Rate calling Zimbabwe: 11.1¢.
Rain Long Distance Call to Zimbabwe rate: 4.5¢.
FoneBuster Flat Prepaid Phone Card: call Zimbabwe for 9.2¢.
Africa Call Prepaid Calling Card Rate to Zimbabwe: 4.0¢.
First Choice Calling Card: call Zimbabwe for 13.3¢.
Good Chat Calling Card Rate for calling Zimbabwe: 4.9¢.